China Sothi class 2 biosafety cabinet Type B2 orinasa sy mpamatsy |SOTHIS
Ny kabinetra biosafety Sothis ClassⅡB2 dia natao ho an'ny fikarakarana azo antoka ny akora mampidi-doza ambany ka hatramin'ny antonony ao amin'ny laboratoara sy ny tontolo hafa.Ny kabinetran'ny biosafety dia manafoana ny fandotoana, ny famotsorana ireo zavamiaina bitika pathogenic na aerosol karsinogène ary ireo akora mifindra amin'ny rivotra ivelany.
Class II, Type B2 kabinetra biosafety dia 100% totalin'ny setroka.Karazana fitaovam-piarovana biolojika izay manome fiarovana ho an'ny mpampiasa, vokatra ary ny tontolo iainana amin'ny potika, entona/setroka ary aerosol.Ny faritry ny fiasan'ny kabinetra biosafety dia tsy mitsahatra mandro amin'ny rivotra voadio amin'ny alàlan'ny sivana HEPA mba hiarovana ny vokatra amin'ny fandotoana raha toa ka misy tsindry ratsy foana ny fikorianan'ny rivotra ao anatiny, ny mpandraharaha sy ny tontolo iainana dia tsy tratran'ny akora biolojika manimba.Ny rivotra rehetra miditra ao amin'ny saron-tava dia alefa / mivoaka any ivelan'ny trano.
1.ISO 4/Class 10 HEPA sivana dia manala ny zavamananaina sy ny particulates 0.3 micron ny habeny amin'ny fahombiazana ny 99.999%.
2. Ny tanky anatiny, ny tanky ranoka ary ny lovia dia vita amin'ny vy 304 stainless.Azo esorina ao amin'ny kabinetra biosafety ihany koa ny lovia asa vita amin'ny vy tsy misy pentina mba hanamora ny fanadiovana.Ny tapany ambany amin'ny toby fanangonam-bokatra dia misy ifandraisany amin'ny rano maloto mba hanadiovana mora sy famonoana otrikaretina.
3. Ny tongotra fanohanana dia tsotra amin'ny famolavolana ary tsy misy kofehy mibaribary, izay afaka manitsy ny haavony sy ny fahamarinan'ny kabinetra biosafety.
4. Ny varavarankelin'ny anoloana dia mampiasa vera mirehitra miaraka amin'ny fomba fijery optika mazava ary tsy misy fiantraikany amin'ny otrikaretina izany.Rehefa ampiasain'ny mpandraharaha dia azo amboarina malalaka sy mora ny toerana.
5. Ny kabinetra biosafety dia natao ergonomika miaraka amin'ny zoro mitongilana 10 degre mba hanomezana fampiononana ambony indrindra sy vokatra hita maso.
6. Rafitra fanaraha-maso fiarovana: Rehefa miakatra mihoatra ny fetran'ny fiarovana amin'ny 200mm ny varavarankely anoloana, dia hisy fanairana feo sy hazavana.
7. Ity Class II ity, Type B2 biosafety cabinet dia 100% totale exhaust unit.Ny BTE dia tsy maintsy avoaka (vented) any ivelan'ny tranobe satria tsy misy ny fihodinan'ny rivotra ao amin'ny kabinetra.Ity endri-javatra setroka tanteraka ity dia mahatonga ny saron-tava B2 ho mety tsy amin'ny fikarakarana poti-javatra fotsiny, fa amin'ny setroka sy ny entona ihany koa.
8. Ny fitaovana fiarovana amin'ny jiro UV naorina dia mety amin'ny famonoana ny ao anaty kabinetra fiarovana.
teo aloha: Laminar Flow Hood
Manaraka: Efitrano madio fandroana rivotra mandalo amin'ny boaty
TDS -SX-BHC-1000, 1300 A2, B2 Sothis kabinetra fiarovana biolojika
Amidy Taratasy - Kabinetra Biosafety Class II B2
Katalaogin'ny vokatra Sothis (Suzhou) Environment Technology Co.Ltd
Kabinetra biosafety 4 tongotra
Kabinetra biosafety 6 tongotra
kabinetra fiarovana biolojika kilasy 2
kilasy kabinetra fiarovana biolojika
Kabinetra biosafety B2
marika kabinetra biosafety
calibration kabinetra biosafety
kabinetra biosafety class 2
kabinetra biosafety kilasy 2 a2
kabinetra biosafety kilasy II karazana a2 famaritana
kabinetra biosafety india
mpanamboatra kabinetra biosafety
Karazana kabinetra biosafety
kabinetra fiarovana biolojika kilasy 1 vs kilasy 2
kabinetra fiarovana biolojika kilasy 2 karazana a2
Kabinetra fiarovana biolojika kilasy II
Kilasy Ii Kabinetra Biosafety
Laminaire flow hood vs biosafety cabinet
kabinetra biosafety portable